အချိန်မတန်ခင်ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ ဂီတအနုပညာရှင်တွေက ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုးအမွေအနှစ်နဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ချန်ရစ်ခဲ့သလဲ? (ပထမပုိင္း) 🎼 🖤 – AkahyarMedia
အချိန်မတန်ခင်ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ ဂီတအနုပညာရှင်တွေက ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုးအမွေအနှစ်နဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ချန်ရစ်ခဲ့သလဲ? (ပထမပုိင္း) 🎼 🖤
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြီး အခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းကို အားလုံးခန့်မှန်းမိကြမှာပါ၊ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်မှောက်မှာ ကံအကြောင်းမလှခဲ့ဘဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ လက်ချိုးရေလို့မရလောက်အောင် အများကြီးမှအများကြီးပါပဲ။ အသက်ရှင်သန်စဉ်မှာ တစ်မူထူးတဲ့ဂီတဖန်တီးမှုတွေနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်မြောက်မြားစွာရှိပေမဲ့ ဒီစာစောင်မှာတော့ ဟိုးရာစုနှစ်၊ ဆယ်စုနှစ်လောက်အထိကို ပြန်ပြီး ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမသွားပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်များကမှ အားလုံးကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်သွားတဲ့ အနုပညာရှင်အနည်းငယ်ကိုပဲ ဦးစားပေးဖော်ပြသွားမှာပါ။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ အားလုံးနဲ့လည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သလို အခုလိုအချိန်မလင့်ပဲဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက ဂီတချစ်သူပရိသတ်တွေအားလုံး ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြောင်းသဝဏ်လွှာတွေ ပေးပို့ခဲ့ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် 💔🗞
အရှေ့ကိုဆက်မသွားခင်မှာ ဒီဆောင်းပါးကိုဖန်တီးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကို ပြောပြဖို့လိုပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်ကတော့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားမယ့် ကွယ်လွန်သူအနုပညာရှင်တွေကို ပြန်ပြီးတမ်းတအမှတ်ရမိစေဖို့နဲ့ ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ သူတို့ရှင်သန်ချိန်ကာလမှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့အနုပညာတွေကို တလေးတစားနဲ့ အမြတ်တနိုးအလေးထားပြီး အသေအချာနားလည်တတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒီလူတွေသာ ဒီလိုမျိုးသေသွားတယ်၊ တကယ်တမ်းမှာ သူတု့ိရဲ့ဂီတနဲ့ ဘဝဖြစ်တည်မှုကို အသေအချာသိတဲ့သူတွေဟာ အလွန့်အလွန်ကို နည်းပါးနေတဲ့အပြင် အပေါ်ယံလောက်ပဲသိပြီး အတင်းစကားတွေမျှဝေ၊ နားလည်မှုတွေ လွဲမှားနေကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို စာဖတ်သူလည်း သဘောပေါက်လောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆို အရှေ့ကိုဆက်သွားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ် ➡️➡️
Lil Peep (ကွယ်လွန်သည့်နေ့စွဲ – Nov 15, 2017) 🛌
စာရေးသူနဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်အတူတူပဲဖြစ်တဲ့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ပန်ဆယ်လ်ဗေးနီးယား (Pennsylvania) မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ကိုယ်ရဲ့မွေးလအတွင်းမှာပဲသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ Lil Peep (အမည်ရင်း Gustav Elijah Ahr) ဟာ သေဆုံးချိန်မှာ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့လုပ်ကြံမှုသတ်ဖြတ်မှုမဟုတ်ပဲ မူးယစ်ဆေးလွန်မှုကြောင့် အသက်ရှုရပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရသူ Lil Peep ဟာ နောက်လာမယ့်တစ်ချိန်မှာ ထွန်းတောက်လာမယ့်အနာဂတ်ရဲ့ဂီတကြယ်တစ်ပွင့်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရသူလည်းဖြစ်တဲ့အပြင် ကိုယ်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ ဂီတပုံစံသစ်ကို ထုဆစ်ဖန်တီးနေသူလည်း ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ အီမိုဟန်အနည်းငယ်ရောယှက်ပြီး ရော့ခ်ဂီတအခြေခံထားတဲ့ သံစဉ်တွေပေါ်မှာ ခေတ်ပေါ် trap ဂီတကို ပေါင်းစည်းပြီး ဂီတသစ်တစ်မျိုးကိုဖန်တီးပြခဲ့တဲ့ Lil Peep ရဲ့တေးသွားတွေအောက် လိုက်ပါစီးမြောခဲ့ကြသူတွေထဲမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကဂီတချစ်ပရိသတ်တွေအပြင်
Soundcloud ရက်ပ်ပါတွေ ရက်ပ်ဂီတကို စတင်လွှမ်းမိုးလာတဲ့အချိန်မှာ Lil Peep ဟာလည်း စွန့်ဦးတီထွင်ဂီတပညာရှင်တွေထဲက တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Billboard 200 မှာ နံပါတ် ၃၈ နဲ့ နံပါတ် ၄ နေရာကိုအသီးသီးဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ Lil Peep ရဲ့စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ် Come over when you’re sober, Pt.1 နဲ့ Come Over When You’re Sober, Pt.2 တို့ဟာ အခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ သူချန်ရစ်ခဲ့တဲ့ဂီတအမွေအနှစ်တွေဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ နာမည်ကျော်လူသိများတဲ့ Awful Things, Benz Truck, Runaway, Life is Beautiful သီချင်းများဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာ တစ်သက်လုံးထင်ကျန်ရစ်နေစေမယ့် သီချင်းကောင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ New York Times ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က ခေတ်သစ် lo-fi rap ဂီတရဲ့ Kurt Cobain လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ရတဲ့ Lil Peep ဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအမှတ်ရနေမယ့် ထူးချွန်တဲ့ဂီတဖန်တီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့ဂီတသစ်ကို ဖော်ကျူးစပ်ဆိုခဲ့တဲ့ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ Lil Peep ဟာ နယူးယောက်မြို့က Huntington Station မှာထာဝရလဲလျောင်းအနားယူလျက်ရှိပါတယ်။ ပရိသတ်များနည်းတူ အမြဲတမ်းအောက်မေ့တမ်းတနေလျက်ပါ Lil Peep aka Gustav Elijah Ahr 🖤
Xxxtentacion (ကွယ်လွန်သည့်နေ့စွဲ – June 18, 2018) 🛌
၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖလော်ရိုင်ဒါ (Florida) မှာ မွေးဖွားခဲ့သူ Xxxtentacion (အမည်ရင်း Jahseh Dwayne Richardo Onfroy) ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး သေဆုံးချိန်မှာ အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ X အနေနဲ့ ဂီတတွေကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ နှောင်းပိုင်းကတည်းကစပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ အချိန်နှစ်နှစ်ကာလအတွင်းမှာ ဂီတချစ်ပရိသတ်တွေနဲ့ လူသားအားလုံးအတွက် သူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ ဘယ်လောက်တောင်ကြီးမားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှနားမလည်ကြသလို ရိပ်လည်းမရိပ်မိခဲ့ကြပါဘူး။ စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း သူသေဆုံးသွားပြီးအချိန်တစ်နှစ်ကျော်အကြာမှသာ သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအလုံးစုံကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း နားလည်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဝန်ခံရပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးမသိကြတဲ့အဖြစ်က X ဟာ အသက် ၁၈ စွန်းစွန်းအရွယ်မှာ အလွန့်အလွန်ကိုရင့်ကျက်ပြီး အရာအားလုံးကိုအရှိအတိုင်းရှုမြင်တတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကို အလင်းပြနေပါပြီ။ တစ်ချို့ကိစ္စရပ်တွေဟာ အချိန်တန်မှ နားလည်နိုင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် X ရဲ့အကြောင်းကို ဒီနေရာမှာအကျယ်တဝန့်တော့ မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ ဂီတလောကမှာ X ချန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အမွေအနှစ်ဟာ တော့်တော်ကိုကြီးမားကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ Heavy Metal, Horrorcore, Scream Rap နဲ့ Alternative ဂီတအမျိုးအစားတွေဟာ သူအဓိကဖန်တီးလိုတဲ့ ဂီတနယ်ပယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ X ကဆိုတဲ့အပြင် ရက်ပ်ဂီတသာမက Rock, Punk နဲ့ Emo ဂီတအမျိုးအစားတွေကိုပါ တစ်ဖက်ကမ်းခတ်အောင် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ X ဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုမှာမှ တစ်ခေါက်ထွန်းပေါက်လာတတ်တဲ့ ဂီတပါရမီရှင်တစ်ယောက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Billboard 200 မှာနံပါတ် ၂ နေရာကို ရရှိခဲ့တဲ့ 17 အယ်လ်ဘမ်၊ ထွက်ရှိလာချင်းမှာပဲ Billboard 200 ရဲ့ နံပါတ် ၁ နေရာကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ “?” အယ်လ်ဘမ်၊ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ singles များဖြစ်ကြတဲ့ Jocelyn Flores, Look At Me, SAD! နဲ့ Changes သီချင်းများဟာ ဂီတပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာ ထာဝရနေရာယူထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အသေအချာထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် X ရဲ့စိတ်ဓါတ်၊ ခံယူချက်၊ အတွေးအခေါ်အယူအဆနဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ Tupac Shakur သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်က ပြောကြားလုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေနဲ့ တူညီပြီးရောင်ပြန်ဟပ်နေတယ်ဆိုတာ မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ X နဲ့ပတ်သက်ပြီး အားလုံးသိသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သီးသန့်စာစောင်ရေးသားပြီး တင်ဆက်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ လောလောဆယ် X နဲ့ဆက်စပ်ပြီး နောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့တစ်ခုကတော့ အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကို အပြင်ကထွက်ပြီး သာမန်ရိုးရှင်းတဲ့အမြင်နဲ့ ကြည့်မြင်ဖို့ပါပဲ၊ တစ်ချိန်မှာနားလည်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ Xxxtentacion မှာ သူကြီးပြင်းရာ ဖလော်ရိုင်ဒါမြို့မှာရှိတဲ့ Boca Raton ပန်းခြံ Memorial Park မှာ ထာဝရလဲလျောင်းအနားယူလျက်ရှိပါတယ်။ ပရိသတ်များနည်းတူ အမြဲတမ်းအောက်မေ့တမ်းတနေလျက်ပါ Xxxtentacion aka Jahseh Dwayne Richardo Onfroy 🖤
Mac Miller (ကွယ်လွန်သည့်နေ့စွဲ – Sep 7, 2018) 🛌
ရက်ပ်ဂီတလောကရဲ့ အတုမရှိတဲ့ပြယုဂ်အဖြစ် ဟစ်ဟော့ရက်ပ်ဂီတပရိသတ်အားလုံးက ယခုအချိန်အထိ အမှတ်တရရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ Mac Miller (အမည်ရင်း Malcom James McCormick) ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့အချိန်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ပန်ဆယ်လ်ဗေးနီးယား (Pennsylvania) မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာကတည်းက ဟစ်ဟော့ရက်ပ်ဂီတကို ရူးသွပ်လာခဲ့သူ Mac ဟာ အသက်ဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ်မှာကတည်းက ကိုယ်ပိုင်ရက်ပ်သီချင်းတွေကို ထုတ်လုပ်ဖန်တီးရေးစပ်နေခဲ့ပါပြီ။ ပရိသတ်အများစုမသိကြတဲ့ Mac Miller ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ချက်ကတော့ Mac ဟာ သင်ပြမယ့်ဆရာသမားမရှိခဲ့ပဲ ဂစ်တာ၊ ဒရမ်နဲ့ စန္ဒရားတို့ကို အသက်ခြောက်နှစ်အရွယ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လေ့လာပြီး ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ တီးခတ်တတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် Mac Miller ဟာ ရက်ပ်ကိုကောင်းစွာရွတ်ဆိုနိုင်ရုံသာမက တေးသွားသံစဉ်များကိုပါ တီးခတ်ရေးဖွဲ့နိုင်စွမ်းရှိသူ ဂီတပါရမီရှင် multi-instrumentalist တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ Mac အနေနဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ K.I.D.S ကစလို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် Grammy ပွဲမှာ ဆုလျာထားခြင်းခံရတဲ့ Swimming အယ်လ်ဘမ်အထိ ဂီတပရိသတ်အမြောက်အမြားရဲ့ ရင်ထဲကိုတိုက်ရိုက်ထိရှမယ့် သီချင်းပေါင်းများစွာထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တကယ်အရည်အချင်းရှိပြီး ကောင်းကျိုးဖန်တီးလိုတဲ့သူတွေကို ကံကြမ္မာကဘယ်တော့မှမျက်နှာသာပေးလေ့မရှိပါဘူး။ မမျှော်လင့်ပဲ ဆေးလွန်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူ Mac Miller ကတော့ အရာအားလုံးကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်ခွာသွားပေမယ့် ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေကတော့ ခံစားချက်မြောက်မြားစွာရောပြွန်းပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါပြီ။ Grammy ပွဲမှာ ဆုပေးဖို့လျာထားခြင်းခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း ပွဲကိုမတတ်ရောက်နိုင်တော့တဲ့ Mac Miller ကို ဂီတလောကတစ်ဝှမ်းလုံးအပြင် သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်များကပါ ကောင်းရာသုဂတိလားစေဖို့ ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ Mac Miller ဟာ သူ့ကြီးပြင်းရာ Pittsburgh မြို့မှာရှိတဲ့ Homewood Cemetery သုသာန်မှာ ထာဝရလဲလျောင်းအနားယူလျက်ရှိပါတယ်။ ပရိသတ်များနည်းတူ အမြဲတမ်းအောက်မေ့တမ်းတနေလျက်ပါ Mac Miller aka Malcom James 🖤
Nipsey Hussle (ကွယ်လွန်သည့်နေ့စွဲ – Mar 31, 2019) 🛌
ဟစ်ဟော့ရက်ပ်ဂီတကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ဟစ်ဟော့နဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လူနေမှုပုံစံကို သဘောကျမြတ်နိုးတယ်ဆိုရင် Nipsey Hussle အကြောင်းပြောဖို့လိုလာပါပြီ။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၅ ရက်နေ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ မွေးဖွားခဲ့သူ Nipsey Hussle (အမည်ရင်း Emias Joseph Asghedom) ဟာ မသေဆုံးခင်အချိန်အထိ သူ့ရဲ့အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဘယ်လိုတေးသံသွင်းလေဘယ်လ်ကိုမှ မမှီခိုဘဲ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ဟစ်ဟော့ရက်ပ်အနုပညာရှင် (Independent Artist) တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Nipsey ဟာ ဂီတဖန်တီးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုတေးသံသွင်းလေဘယ်လ်မျိုးအောက်မှာမှ ဂီတကျွန်ဖြစ်စရာမလိုဘဲ တစ်ကိုယ်တော်လွတ်လပ်တဲ့အနုပညာရှင်အဖြစ် ရပ်တည်လို့ရတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို ရက်ပ်သီချင်းတွေထဲမှထည့်သွင်းရေးသားပြီး ဂီတကမ္ဘာကြီးဆီပေးပို့နေတဲ့ Nipsey Hussle ဟာ ဟစ်ဟော့လောကမှာ ရှာမှရှားပါးလှတဲ့ စွန့်ဦးထီထွင်စီးပွားပညာရှင်လူတော်တစ်ယောက်လို့ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဒါတင်မကသေးဘဲ Nipsey ဟာ ဂီတဖန်တီးသူအနုပညာသမားဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ထက်ပိုတဲ့ သူရှင်သန်ကြီးပြင်းရာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့ရပ်ဝန်းအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ရပ်တွေကိုလည်း ဘဝတစ်လျှောက်မှာ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်လာသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်လူသိများတဲ့ Nipsey ရဲ့ Marathon Agency နဲ့ Marathon Clothing ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် Crenshaw ရဲ့အထင်ကရမြို့မျက်နှာဖုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျည်ဆန်တွေနဲ့ ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းတွေကြားမှာ ကြီးပြင်းလာသူဖြစ်ပေမယ့် အားလုံးနဲ့အတွေးအခေါ်ကွဲပြားခဲ့သူ Nipsey ဟာ သူ့လိုပဲဘဝအခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်နေရသူတွေကို ကောင်းတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြရုံသာမက အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ဒုစရိုက်အဖွဲ့သားတွေနဲ့ ဆိုးသွမ်းခဲ့သူတွေကိုလည်း သာမန်လူအဖြစ်ဘဝရပ်တည်နိုင်အောင် အလုပ်ပေါင်းများစွာပေးအပ်ပြီး လုပ်ကိုင်စေခဲ့ပါတယ်။
Nipsey ဟာ သူ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကြောင့် အခြားနာမည်ကျော်အနုပညာရှင်များကသာမက ပြိုင်ဖက်ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းများကပါ လေးစားရတဲ့ လူသားအကျိုးပြုလှုပ်ရှားသူ၊ အနုပညာသမား၊ စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Nipsey ရဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲဦးထွက် Victory Lap အယ်လ်ဘမ်ဟာ ၆၁ ကြိမ်မြောက်ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံးရက်ပ်အယ်လ်ဘမ်အဖြစ် ဆုပေးဖို့လျာထားခြင်းခံခဲ့ရပေမယ့် အချိန်စောပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့ Nipsey Hussle တစ်ယောက်ကတော့ ပွဲကိုမတတ်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အကယ်လို့များအသက်မဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးဆိုရင် Nipsey ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ လော့စ်အိန်ဂျယ်လ်စ်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ (LAPD) က အကြီးအကဲတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး မဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂိုဏ်းပရိပက္ခတွေ၊ ဂိုဏ်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ သေနတ်အပစ်အခတ်တွေကို ရပ်စဲပပျောက်သွားအောင် အတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးကွဲပြားခြားနားမှုအကြီးကြီးကို လုပ်ဆောင်မယ့်သူမျိုးကိုမှ ကံကြမ္မာကခေါ်ဆောင်တတ်တာ လောကကြီးရဲ့သဘာဝလို့တောင် မှတ်ယူရမလားမသိပါ။ အခုဆိုရင်တော့ Nipsey Hussle ရဲ့ရုပ်အလောင်းဟာ Hollywood Hills လို့ခေါ်တွင်တဲ့ Forest Lawn Memorial Park မှာ ထာဝရလဲလျောင်းအနားယူလျက်ရှိပါတယ်။ ပရိသတ်များနည်းတူ အမြဲတမ်းအောက်မေ့တမ်းတနေလျက်ပါ Nipsey Hussle aka Emias Joseph Asghedom 🖤
အမြဲတမ်းအောက်မေ့တမ်းတနေရမယ့် ရှင်သန်ဖြစ်တည်မှုများနဲ့ စာရေးသူအနှစ်ချူပ် 💐✍️
ကျွန်တော်တို့တွေ့တွေ့နေရတဲ့ နေ့မြင်ညပျောက် ဝမ်းနည်းကြောင်းသတင်းစကားတွေထဲမှာ ဒီလိုမျိုးအနုပညာရှင်တွေ ပါဝင်နေဖို့မသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ အားလုံးလက်သင့်ခံရမယ့် ပထမဆုံးအချက်ပါ။ အရာအားလုံးဟာ ဖြစ်ပြီးရင်ပျက်ရမယ်၊ အကျိုးရှိရင်အကြောင်းရှိစမြဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ကွယ်လွန်မှုတွေကနေ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ သင်ခန်းစာယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်သန်နေရတဲ့ဘဝဟာ တကယ်တမ်းမှာ တိုတောင်းလွန်းပါတယ်၊ ဒီတော့ ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ခွန်အားအရှိဆုံးထွက်ပေါက်၊ လူသားအားလုံးကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့တေးသွားတွေ၊ ကိုယ်ဖန်တီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂီတတွေထဲမှာ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ အမုန်းတရားတွေ၊ အာဃာတအငြိုးတရားတွေ၊ ဝါဒဖြန့်မှုတွေ ထည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဟာ ရိုးသားရာမကျတော့ပါဘူး။ ဂီတမှာမှမဟုတ် ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာလိမ္မာရာဟာ ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာဖြစ်တဲ့အတွက် အလွန့်အလွန်တိုတောင်းလှတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခဏတာလေးမှာ အရာအားလုံးကို အကောင်းဆုံးသာလုပ်ဆောင်ဖို့ ဒီစာစောင်ကနေ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် 🤜🤛
သတင်းတွေ သီချင်းတွေကနေ ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေကို ပြောင်းလဲနေတာတွေ၊ နည်းပညာပစ္စည်းတွေကနေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မရှိတဲ့လိုအင်ဆန္ဒကို ရှိလာအောင်ဖန်တီးပေးနေတာတွေ၊ တိုင်းတစ်ပါးကစီးပွားဖြစ်အောင် ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတာတွေ အစရှိတာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အာရုံကို လွှဲပြောင်းအောင် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးစွဲမက်နေတဲ့အရာတွေ၊ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်က လူအများရဲ့အားပေးထောက်ခံခြင်းတွေ၊ ပရိသတ်တွေရဲ့ဝန်းရံခြင်းတွေ အစရှိတဲ့စွဲလမ်းမှုတွေဟာ တကယ်တမ်းလက်တွေ့ဘဝမှာ တစိုးတစင်းမျှ အရေးမပါတာကို မြင်အောင်ကြည့်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်ဖန်တီးတဲ့အနုပညာတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ အမှန်တရားကို လူတိုင်းကြားသိတွေ့မြင်နိုင်မယ့် အသံမျိုးကိုဖန်တီးပေးဖို့လိုကြောင်းပြောရင်း ဒီနေရာမှာ ဆောင်းပါးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။ အထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ဘဝဖြစ်တည်မှုနဲ့ သူတို့အသက်ရှိခဲ့စဉ်အချိန်ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ဂီတတွေကို အခုချိန်မှာပြန်လည်မျှဝေပေးပြီး အစဉ်မပြတ်ကောင်းရာမွန်ရာရောက်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးဖိ့ုလိုကြောင်း နှိုးဆော်လိုက်ပါရစေ။ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပြီး ကိုယ့်အကျိုးအတွက် တစ်ခုခုရရှိသွားတယ်ဆိုရင် ရေးသားတင်ဆက်ရကျိုးနပ်ပါပြီ။ နောက်လာမယ့်အခါတွေမှာလည်း အလားတူသတင်းစာစောင်တွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ ပုံမှန်ဖတ်ရှုပေးသူများရော၊ ဖတ်ရှုအားပေးသူအသစ်များကိုပါ ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်။ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် 👋
May they rest in peace but their spirits are always alive inside us. 🦋
၁၇ ရာစုကိုလိုနီခေတ်နဲ့အတူ မှော်ဆန်တဲ့ဂိမ်းလောကကြီးထဲမှာ တစ်မူထူးတဲ့ဂိမ်းကစားဟန်နဲ့ RPG အရသာသစ်ကိုပေးစွမ်းမယ့် Greedfall Previous post
ကြိုးစားမှု အပြည့်နဲ့သာ ပေးဆပ်နိုင်ကြပါစေ Next post